त्यहाँ धेरै अनलाइन मोबाइल प्ले उपलब्ध प्रसिद्ध सेलिब्रेटीहरू आधारित छन् भनेर स्लट छन्, टिभी श्रृंखला, र चलचित्र. राजा काँग (अर्को उत्प) तिनीहरूलाई मध्ये एक छ, र यो स्लट प्रेमीहरूले बीच पहिले नै लोकप्रिय छ. प्रसिद्ध आधारित 1933 एउटै नाम को चलचित्र, यो स्लट अत्यन्त क्रोधित छ र न्यूयोर्क शहर नाश गर्न आफ्नो बाटो मा छ जो एक विशाल गोरिल्ला को कथा छ. के तपाईं पनि गोरिल्ला जीवन सुरक्षित हुनेछ यो तर्साउने प्राणी देखि शहर बचत गर्न र. तपाईं शहर बचत गर्नका लागि केही अचम्मको पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ. तपाईं पनि अचम्मको जीत हुनेछ 150 विमानहरु देखि राजा काँग बचत गरेर निःशुल्क spins. हरेक स्पिन छिटो-paced कार्य र मनोरञ्जन को पूर्ण हुनेछ, त्यसैले यो रोमाञ्चकारी अनलाइन स्लट बारेमा थप अन्वेषण गर्न तयार.
विकास र यो अचम्मको खेल सुरु को क्रेडिट NextGen गेमिङ जान्छ. यो कम्पनी विश्वको अग्रणी अनलाइन स्लट विकासकर्ताहरूले सूचीमा शीर्ष स्थिति धारण. पक्कै, सबै भन्दा राम्रो अनलाइन खेल विकासकर्ताहरूले यो कम्पनी को लागि काम र त यो सफलतापूर्वक प्रथम श्रेणी ग्राफिक्स र मनोरंजक बोनस सुविधाहरू भरिएको खेल सुरु. राजा काँग (अर्को उत्प) पनि विकासकर्ताहरूले 'रचनात्मकता को एक महान उदाहरण हो, जो अनलाइन खेल संसारमा विशाल लोकप्रियता पायो छ.
खेल्दै राजा काँग (अर्को उत्प), 5×3 रील र 25 payline अनलाइन स्लट, तपाईं को लागि एक अविस्मरणीय अनुभव हुनेछ. यो रील र पृष्ठभूमि तरिकामा सजाया छ खेल एकदम मूल राजा काँग चलचित्र रूपमा समान देखिन्छ. विकासकर्तालाई मुख्य प्रतीक रूपमा चलचित्र मुख्य वस्तुहरु प्रयोग गरेका छन्. राजा काँग जंगली प्रतीक हो र गेम लोगो स्क्याटर प्रतीक हो. यो wagers 25p र £ 50 बीचको र प्रत्येक स्पिन स्क्रिनमा अचम्मको एनिमेशन ट्रिगर.
रील मा राजा काँग प्रतीक जंगली प्रतीक भूमि3र राजा काँग Goes बाँदर सुविधा ट्रिगर हुनेछ. अब जंगली प्रतीक विस्तार र स्क्रिन मुंहतोड गरेर रील मा सबै स्थितिहरु कवर. यो सुविधा खेलाडी ठूलो पुरस्कार इनाम दिनुहुन्छ, यदि जंगली सबै भन्दा राम्रो विजेता दृश्यहरु सिर्जना अन्य उच्च-मूल्य प्रतीक संग.
राजा काँग (अर्को उत्प) अनलाइन स्लट एउटा अचम्मको मुक्त स्पिन सुविधा छ, जो भनिन्छ राजा काँग Smash सुविधा. न्यूनतम भूमि3पाँच रील जुनसुकै ठाउँमा छरिन्छ र यो सुविधा सक्रिय हुनेछ. अब तपाईं विमानहरु मुंहतोड मा राजा काँग मदत हुनेछ. तपाईं सम्म जित्न सक्छौं 150 मुक्त spins उहाँले सफलतापूर्वक सबै विमानहरु smashes भने. मुक्त spins को यस्तो ठूलो संख्या आफ्नो खेल खातामा र अन्ततः आफ्नो बैंक खातामा पुरस्कार धेरै थप्न पर्याप्त हुनेछ.
राजा काँग (अर्को उत्प) अनलाइन स्लट NextGen गेमिङ गरेको विकासकहरूको साँचो रचनात्मकता प्रतिनिधित्व. यो सुविधा धनी खेल मनोरञ्जन र भारी जीत को लागि एक महान विकल्प छ.